देउवाको ‘किचन क्याबिनेट’का विश्वकर्मा भन्छन्– काँग्रेस पहिलो शक्ति नै छ, सभापतिले किन छाड्ने ?
Saturday, 24 Feb, 2018 12:55 PM
यतिवेला काँग्रेसभित्र वैचारिक र सांगठनिक विवाद चुलिएको छ । पार्टी हारको जिम्मेवारी सभापति शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्ने र नेतृत्व हस्तारन्तरण गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीका केही नेताहरु दिनदिनैजसो बैठक गरिरहेका छन् । उनीहरुले यसलाई पार्टी सुदृढीकरण अभियान नाम दिएका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवापक्षीय नेताहरुले भने यो अभियानलाई केही नेताहरुको उत्ताउलो हर्कत भनेर संज्ञा दिएका छन् । अवस्था यस्तै रहे पार्टी सुदृढीकरण अभियानको नाममा गुटगत भेला गरिरहेका नेताहरुलाई सभापति देउवाले कारबाही गर्नेसम्मको मनस्थिती बनाएका छन् । उता संसदीय दलको नेता चयनको विषयमा पनि काँग्रेस विभाजित भएको छ । संसदीय दलको नेतामा सभापति देउवा, महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंहले दावी गरिरहेका छन् । संसदीय दलको नेता चयनका विषयमा आजै कांग्रेस बैठक बसिरहेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर न्यूजसेवाका राजु ढकालले सभापति देउवा निकट नेता मीन विश्वकर्मालाई केही प्रश्न गरका छन् :
- काँग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनका लागि जोडदार आवाज उठिरहेको छ । अब नेतृत्व परिवर्तनको माग समयको आवश्यकता हैन र ?
निर्वाचनको परिणामलाई लिएर यसको वास्तविकतालाई नबुझिकन केन्द्रीय समितिका केही नेता साथीहरुले हतार–हतारमा उत्ताउलो अभिव्यक्ति दिएको मात्रै हो । अहिले विस्तारै–विस्तारै उहाँहरुले निर्वाचनको परिणाम, पार्टीको क्षमता र शक्तिका बारेमा बुझ्दैजाँदा उहाँहरु शान्त बस्नुभएको छ । नेतृत्व परिवर्तन त नियमित नै हो । यो गतिशिल भइरहन्छ तर, कहिले गर्ने भन्ने कुरामा केही साथीहरुले तत्काल महाधिवेशन भन्नुभएको छ । त्यो पनि सम्भव छैन तर, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक अनिवार्य छ । महासमितिको बैठक प्रत्येक बर्ष बस्नुपर्छ त्यो विधानमै उल्लेख छ । माग गरेअनुसार होइन विधानको व्यवस्थाअनुरुप सभापति र केन्द्रीय कार्यसमितिले महासमितिको बैठक पनि डाक्छ । महाधिवेशन विधानले तोकिएको समयभित्र नै हुन्छ । त्यसैले बीच–बीचमा उहाँहरुले नेतृत्व परिवर्तन वा कसैलाई विस्थापन गर्ने भन्नेजुन अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । यो हल्का र उत्ताउलो अभिव्यक्ति हो । यसले पार्टीको हित गर्दैन ।
-निर्वाचनमा पार्टीको हार भएको छ । यस्तोबेला कतिपय मुलुकमा नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै जिम्मेवारी हस्तान्तरण पनि गर्छन् । काँग्रेस नेतृत्वले पनि त्यस्तै गर्दा हुँदैन ?
वास्तविक धरातल के हो भने ०६४ देखि ०७४ सम्म आइपुग्दा काँग्रेसले हारेको छैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको निर्वाचनमा त्रिपक्षीय लँडाई थियो । काँग्रेसले २१ प्रतिशत मत मात्रै प्राप्त ग-यो । हामीले हेर्ने जनमत हो । एउटा राजनीतिक अर्को गणितीय हिसाब हुन्छ । त्यो बेला राजनीतिक हिसाबमा हामी २१ र गणितीयमा १९ प्रतिशतमात्रै थियौं । ०७० मा आइपुग्दा राजनीतिक रुपमा हामी ३० र गणितीय हिसाबले २९ प्रतिशत पुग्यौं । अहिले हेर्दाखेरी काँग्रेस राजनीतिक रुपमा ३५ र गणितीय हिसाबले २५ प्रतिशतमा छौ । त्यसैले राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हामीले जितेका छौं । कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा काँग्रेसको मत घटेको छैन । प्रत्यक्षतर्फ हेर्नुहुन्छ भने ८० सिट जितेर पहिलो पार्टी हुँ भन्नेलाई हामीले २३ सिट जित्दैगर्दा पनि ५ लाख ११ हजार मतले हामीले उछिनेका छौं । त्यसैले पार्टीको शक्ति क्षय भएको होइन यो गणितीय, प्राविधिक र अरुको साँठगाँठ र तालमेलका कारणले काँग्रेस दोस्रो भएको मात्रै हो । काँग्रेसको क्षमताका कारणले दोस्रो भएको होइन । काँग्रेस क्षमतामा अहिले पनि पहिलो नै छ । त्यसैले नेतृत्वले यति परिणाम ल्याउँदाल्याउँदै पनि राजीनामा गर्नुपर्ने कारण के ? काँग्रेसको कारणले हारेको होइन । अरुको कारणले काँग्रेस सानो देखिएको मात्रै हो । त्यसैले काँग्रेसले अब थपशक्ति संचय गर्दै संगठन विस्तार गरेर पार्टीभित्र देखिएका केही फरक मत र असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीले राम्रो पोजिसन ल्याएन भनेर नेतृत्वले छोड्न सक्छ । तर, पार्टीमा त्यस्तो विकल्प नसोचिएको हुनाले अहिले यही नेतृत्व र संरचनालाई परिमार्जित गर्दै अगाडि लिएर जाने हो ।
-काँग्रेसका युवा नेताहरु पार्टी सुदृढीकरण गर्नुपर्छ र यसका लागि नेतृत्वले बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ भन्दै दिनदिनैजसो भेला गरिरहनुभएको छ । यसले नेतृत्वलाई दवाव दिएको छ कि छैन ?
दवाव त दिन्छ नै । तर, केही नेताहरुको शैली उहाँहरुको अभियान हेर्दा यसले नेतृत्वलाई दवावभन्दा पनि संगठनमा थप अन्यौल सिर्जना गरिरहेको छ । यसले पार्टीलाई एक बनाउँदैन । झन् समूह–उपसमूह निर्माण हुँदै जाने भएको हुनाले यसले राम्रो गर्दैन । अहिलेको नेतृत्वलाई परिमार्जन, व्यवस्थित गर्नुप-यो । केन्द्रीय समितिमा जसरी कामहरु भइराखेको छैन त्यसलाई गराउनुप-यो । कार्यक्रम र गतिविधि बढाउनुप-यो । यसरी जाने हो तर, एउटा परिणामबाट अत्तालिएर उत्ताउलो अभिव्यक्ति दिएर पार्टी संगठन निर्माण हुँदैन । यसले पार्टीलाई झन कमजोर बनाउँछ ।
-त्यसै त काँग्रेस गुट–उपगुटमा लाग्दा ओरालो लाग्यो भनिदैछ । अहिले पार्टीभित्र भइरहेका क्रियाकलापले त काँग्रेसमा गुट–उपगुट झनै संस्थागत हुने तपाईहरुको बुझाई हो ?
त्यही भएर मैले भनिराखेको छु यो गलत काम हुँदैछ । काँग्रेसमा अरु पार्टीमा जस्तो कडा अनुशासनको कार्यान्वयन अहिले पनि भएको छैन । जसका कारणले गर्दा उहाँहरुले स्वतन्त्ररुपले अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ । कारबाही कडा नगर्दिएको कारणले चुनावका क्रममा केही साथीहरुको अभिव्यक्तिले पार्टीलाई हानी ग¥यो । अनावश्यकरुपले कसैको विरोध गर्ने र समर्थन पनि गरिदिने गर्नुहुन्छ । हुनत काँग्रेसभित्र यसलाई सामान्य नै मानिन्छ तर, योभन्दा ज्यादाहुँदै गयोभने पार्टीलाई नोक्सान नै पु¥याउँछ फाईदा गर्दैन ।
-त्यसो हो भने के अव पार्टी सभापतिले यस्ता नेताहरुलाई कारबाही गर्नुहुन्छ ?
सभापतिले मात्रै नभनौ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले केही नेताहरुको बारेमा गम्भीरताका साथ छलफल गरिरहेको छ । जसरी अहिले केही नेताहरुले गुट–गुट बनाएर छलफलमा बसिरहनु भएको छ । पार्टीलाई नोक्सान हुने गरेर अभिव्यक्तिहरु दिएरहनु भएको छ । मलाई लाग्छ उहाँहरुको वारेमा नेताहरुलाई राम्ररी जानकारी छ र उहाँहरुले यसबारेमा छलफल पनि गरिरहनु भएको मैले बुझेको छु ।
-काँग्रेसभित्र एउटा पंक्तिले पार्टी पराजयको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ । यसको जिम्मेवारी सभापतिको मात्रै हो वा अरुले पनि लिनुपर्छ ?
नेतृत्व भएको हुनाले सभापति शेरबहादुर देउवाले जसअपजस त लिनैपर्छ तर, पार्टी हारको कारण सभापति पनि होइन काँग्रेस पनि होइन । पार्टीले हारेको छैन । हामीले परिणाम कम ल्याएका हौं । कहिलकाँही हुन्छ नि कुनै विद्यार्थीको गतसाल ४० नम्बर आएको थियो अहिले राम्रो पढेर उसको ७० आयो तर, अर्को मान्छेले ७५ ल्याईदियो भने उसको पढाई विग्रेको होइन नि ! उसको त राम्रो भएको हो । त्रिपक्षीय लँडाई लडेको भए काँग्रेसले अहिले बहुमत ल्याउने रहेछ तर, त्रिपक्षीय लँडाई भएन । द्विपक्षीय मात्रै भयो । यसमा हाम्रो प्राविधिक त्रुटी पनि छ । हामीले लोकतान्त्रिक गठबन्धन राम्रो बनाउन सक्नुपथ्र्यो । विपक्षीका निर्णयका बारेमा समयमा अनुमान गर्नसक्नुपथ्र्यो यसमा हाम्रो कमजोरी भएकै हो । यस मामिलामा काँग्रेसको नेतृत्वले गल्ती गरेको हुँदैहोइन भन्न मिल्दैन तर, सबै दोष फेरी सभापतिकै कारणले भएको हो भन्ने चाँहि होइन । नेतृत्वले राम्रो नराम्रोको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर अब जुन ‘भोल्यूम’मा सभापतिले राजीनामा गर्नुपर्छ उहाँलाई हटाउनुपर्छ, पार्टी पुनर्रगठन गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आइरहेको छ त्यो सान्र्दभिक छैन । त्यो उत्ताउलो छ ।
काँग्रेसभित्र नेताहरुको आरोप–प्रत्यारोप सुन्दा नेताहरु निकै हतास मनस्थितीमा पुगेजस्तो देखिन्छ नि ?
अलिकति थकित भएको बेला निराशाजनक अभिव्यक्ति हुन्छ । मेरो मनमा एउटा दृढ विश्वास के पलाएको छ भने काँग्रेस कमजोर र थोकेको छैन । यसको प्राविधिक परिणाम मात्रै यस्तो आएको हो । त्यो पनि हाम्रो होइन अरुका कारणले हो । त्यसो भएको हुनाले केही साथीहरुले दिएको अभिव्यक्ति सामान्य छैन अहिले । केही दिन अघिसम्म यसलाई सामान्य मान्न सकिन्थ्यो । अब यसले पार्टीलाई नोक्सान पु-याउन थालेको हुनाले नेतृत्व यसबारेमा गम्भीर हुनुपर्छ । नेतृत्वको आलोचना गर्ने पनि केन्द्रीय कार्यसमिति र महासमितिको बैठक छ । तर, नेताहरुको चरित्र, क्षमता, भविष्य र गतिविधिका बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु पार्टी अनुशासनभित्र पर्दैन ।
संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापतिले फेरी पनि दावी गर्नुहुन्छ की अब अरुलाई पालो दिनुहुन्छ ?
अहिले पहिलो र दोस्रो पार्टीका बीचमा ठूलो मतअन्तर छ । तत्कालै काँग्रेस सरकारमा जाने अवस्था पनि छैन । मेरो व्यक्तिगत धारणामा जानु पनि हुँदैन । त्यसैले यतिबेला पार्टी निर्माणको समय हो । पार्टीलाई सबै ढंगबाट समग्रतामा चुस्त–दुरुस्त र शक्तिशाली बनाउँदै जनतासँग रहेको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै हामीअघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि पार्टी सभापति या अरु कोही भए पनि सर्वसम्मत नै बनाउनुपर्छ । मतदानमा जान हुँदैन । कोही नेताहरुले उत्ताउलो पाराले म फलानासँग चुनाव लड्छु भन्नु भो भने त्यो अभिव्यक्ति पार्टीको वर्तमान अवस्थामा र मलुकको राजनीतिक परिस्थतीलाई मध्यनजर गर्दा सान्र्दभिक हुँदैन । सभापतिले अरु कोही व्यक्तिलाई प्रस्ताव नगरेसम्म अहिलेलाई सभापति नै संसदीय दलको नेता बन्नु राम्रो हुन्छ ।